Ezona silicones zibalaseleyo kwi-aquariums: uthelekiso kunye nesikhokelo | Ngeentlanzi
UNatalia Cerezo | | Ii-Aquariums ze-DIY
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-silicone yee-aquariums sisiseko esimele ukuba sibe naso nakuphi na ukuhlaOko kukuthi, ukuba ngequbuliso kuvela ukuvuza kwi-aquarium yethu kwaye iqala ukuphulukana namanzi. I-silicone yeyona mveliso intle esiza kuyifumana ukuyilungisa, kuba ayinamanzi kwaphela kwaye, ukuba ilungiselelwe ngokukodwa, ayonakalisi impilo yeentlanzi zethu.
Kweli nqaku Siza kubona ukuba yeyiphi i-silicone esinokuyisebenzisa kwi-aquarium yethu, ezona mpawu zayo zibalaseleyo kunye nemibala kunye nalapho ungathenga khona ezona mveliso zibiza kancinane. Ukongeza, ukuba unomdla kwesi sihloko sipheleleyo se-DIY aquariums, sicebisa ukuba ufunde eli nqaku ukwakha i-aquarium yakho yetyuwa yamanzi.
1 Eyona silicone yasemanzini ekhuthazwayo
2 Kutheni le nto i-aquarium silicone ikhethekileyo kwaye awungekhe usebenzise nayiphi na i-silicone?
3 Ngaba i-silicone engathathi hlangothi ilungele i-aquariums?
4 Imibala ye-acrylic silicone
5 Uyifaka njani ngokufanelekileyo i-aquarium silicone
6 Kufuneka ihlale ixesha elingakanani i-silicone kwi-aquarium?
7 Olona hlobo luLungileyo lwe-Aquarium Silicone
7.6 Yakha kwakhona
8 Apho ungathenga khona abicah ashibhile
Eyona silicone yasemanzini ekhuthazwayo
Ukuze ungenzi mpazamo ekukhetheni, apha ngezantsi siqokelele ngokuthe ngqo ezinye zeesilicones ezinconywayo ze-aquarium ongayi kuba nangxaki nazo:
IOlivé Chemistry -...
Abicah nabaluki ...
Kutheni le nto i-aquarium silicone ikhethekileyo kwaye awungekhe usebenzise nayiphi na i-silicone?
I-Aquarium silicone yinto eluncedo kakhulu kokubini yokulungisa i-aquarium endala okanye eyonakeleyo okanye ukudibanisa entsha, kunye nokuncamathelisa okanye ukuqinisa izinto kunye nokuhombisa. Nangona kukho ezinye iimveliso ezizalisekisa umsebenzi ofanayo, ngokuqinisekileyo i-silicone iyona isetyenzisiweyo, kuba iyimveliso esekwe kwi-silicone kunye ne-acetone emelana namaqondo obushushu agqithisileyo, isenza ukuba silunge. Ngendlela, le nto ayisebenzi kwii-aquariums ze-acrylic, kodwa kufuneka zenziwe ngeglasi.
kunjalo, ayizizo zonke ii-silicones ezikhoyo zentengiso ezikhuselekileyo ukuba zingasetyenziswa kwi-aquarium, njengoko zibandakanya ezinye iikhemikhali okanye fungicides ezinokuchaphazela impilo yentlanzi yakho. Nangona, ngokomgaqo, ukuba ilebheli ithi "100% abicah" luphawu lokuba lukhuselekile, kungcono ukhethe imveliso eyilelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwiindawo zasemanzini.
Ngaba i-silicone engathathi hlangothi ilungele i-aquariums?
Singahlulahlula i-silicone kumaqela amabini amakhulu, nokuba yi-acetic okanye ayithathi cala. Kwimeko yokuqala, yisilicone ekhupha iiasidi kwaye inevumba elibonisa uphawu, elifana neviniga. Inokuchaphazela ezinye iintlanzi kwaye ngaphezulu kwayo kuthatha ixesha elide ukoma.
I-silicone engathathi hlangothi, kwelinye icala, ayikhuphi naluphi na uhlobo lweasidi, ayinuki kwaye iyoma ngokukhawuleza. Ngokomgaqo, ungayisebenzisa kwi-aquarium, nangona kucetyiswa ngakumbi ukuba uthenge i-silicone ethile oza kuyisebenzisa kule meko, kuba izinto zinokutshintsha phakathi kwabavelisi. Ii-silicones ezikhethekileyo zenzelwe ukuba zisetyenziswe kwi-aquariums, ngenxa yoko awuyi kufumana izoyikiso ezingalindelekanga.
Imibala ye-acrylic silicone
Logama nje i-silicone oyithengayo ikhethekileyo kwii-aquariums, oko kukuthi, oko musa ukuphatha nayiphi na imichiza enokuba yingozi kubomi beentlanzi zakho, Ukukhetha umbala omnye okanye omnye kwi-silicone yinto nje yokujonga ubuhle. Ezona zixhaphakileyo (nangona zikhona ezinye, ezinje ngombala ongwevu okanye omdaka) yimibala emhlophe, engafihlisiyo okanye emnyama yesilicone.
IiMovilideas – 5 yeemitha...
Nangona ngokungathandabuzekiyo ngowona mbala we-siliconeI-silicone emhlophe ayihlali ibonakala ilungile kwi-aquariums ngokuchanekileyo ngenxa yombala wayo (nangona izinto zitshintsha ukuba i-aquarium yakho inesakhelo esimhlophe, kunjalo). Ungayisebenzisa ukutywina amanani kwisiseko se-aquarium.
Owona mbala we-silicone ucetyiswayo we-aquariums, ngaphandle kwamathandabuzo, uyabonakala. Ayisiyongxaki kuphela ukuba yeyiphi umbala kwi-aquarium yakho, kodwa iya kudityaniswa kakuhle emanzini nakwiglasi. Ungayisebenzisa ukuncamathisela nantoni na okanye wenze naluphi na ulungiso, enkosi kumbala wayo ongekhoyo ngekhe uqaphele nantoni na.
I-silicone emnyama, njengakwimeko emhlophe, iyimveliso eya kuxhomekeka kukhetho lwakho kunye nombala we-aquarium yakho. Njengoko i-yayas isitsho, into elungileyo malunga nomnyama kukuba ngumbala osokolayo kakhulu, nawo nawo kunokuba yinto elungileyo ukuba ufuna ukufihla into okanye uncamathisele imihombiso kwindawo emnyama, enje ngemvelaphi.
Uyifaka njani ngokufanelekileyo i-aquarium silicone
Abicah ihamba kakuhle kakhulu ukulungisa ii-aquariums, kodwa awungekhe uyisebenzise njengoko injalo, ngokuchaseneyo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uthotho lweemeko kunye nendlela yokwenza:
Ngokomzekelo, ukuba uthenge i-aquarium yesibini, Qiniseka ukuba akukho zintanda kwaye, ukuba zikhona, zilungise kuqala nge-silicone.
Ingcono kune thulula i-aquarium ngaphambi kokuba uqhubekeKuba umphezulu apho kuya kusetyenziswa khona i-silicone kufuneka ucoceke kwaye womile kwaye, ukongeza, kuya kufuneka wome.
Kwimeko apho awufuni kukhupha yonke i-aquarium, ungayikhupha de kube kushiyeke umphezulu, nangona kule meko kuya kufuneka Lumka kakhulu ungalahli i-silicone engamanzi emanzini (Njengoko unokucinga, asikukhuthazi konke konke).
Ukuba uya lungisa iglasi eyayilungisiwe ngaphambili nge-silicone, coca intsalela endala ngemela kunye ne-acetone. Yomise kakuhle ngaphambi kokuyilungisa.
I-silicone oyisebenzisayo Akunyanzelekanga ukuba ibenamaqamzaUkuba akunjalo, banokugqabhuka kwaye babangele okunye ukuvuza.
Ngokufanayo, ukuba uza kudibanisa iziqwenga zeglasi ezimbini kunye nesilicone, Qinisekisa ukuba kukho izinto phakathi kwezi zimbini. Ukuba iglasi inxibelelana nenye iglasi inokuqhekeka ukuba iyancipha okanye iyanda ngenxa yotshintsho lobushushu.
Ukulungiswa kwe ngaphakathi ngaphandle ukuze abicah ugcwalisa ngokupheleleyo ukuqhekeka.
Ekugqibeleni, mayome okoko ufuna.
Kufuneka ihlale ixesha elingakanani i-silicone kwi-aquarium?
Ukuze usebenze kakuhle, njengoko sikuxelele, kuya kufuneka uyeke i-silicone yome ngokugqibeleleyo, kungenjalo kuya kuba ngathi akukho nto uyenzileyo. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba uyihlonele inkqubo yokumisa kwale mveliso, ethi ihlala iphakathi kwama-24 nama-48 eeyure.
Olona hlobo luLungileyo lwe-Aquarium Silicone
Kwimarike sifumana Amanqaku amaninzi e-silicone, ke ukufumana eyona ilungileyo kwi-aquarium yethu kunokuba yinto entle. Kungenxa yoko le nto siza kubona olona luhlu lucetyiswayo:
I-Olivé silicones yi zakudala kwilizwe lokwakha. Umgca wee-aquariums uphawule ukoma ngokukhawuleza, ukunamathela okuhle kunye nokomelela. Ukongeza, bayakwala ukuguga kakuhle, ke imveliso iya kuhlala iminyaka emininzi isenza umsebenzi wayo. Njengazo zonke iisilicones zolu hlobo, le mveliso iyahambelana negluing glass.
Olu hlobo lophawu lunika umdla ukuba imveliso yalo, ngakumbi ejolise kwi-aquariums, yiyo ukumelana noxinzelelo lwamanzi kwaye iyahambelana neendawo zamanzi zetyuwa. Icacile kwaye, njengoko ihambelana neglasi, unokulungisa ii-aquariums, iitanki zentlanzi, izindlu zokugcina ukutya, iifestile ... ukongeza, iyayichasa imitha ye-UV kwizibane, ke ayizukuphulukana nokubambelela.
Soudal ibonakala iyimveliso ecacileyo nefanelekileyo ye-aquariums, ebhengezwa njengoyena uxhathisayo kutshintsho lobushushu. Isebenza kuphela kwiglasi yokuncamathelisa kwiglasi, njengoninzi lweesilicones, kwaye ayinakupeyintwa. Inenqanaba elihle kakhulu lokunamathela.
Into elungileyo malunga neemveliso zolu phawu kukuba, ukongeza ekubeni yenzelwe ngokukodwa ii-aquariums, i-cannula ine-cannula eyakhelweyo ngaphakathi enokubekwa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo, ezilungele ukulungisa iintanda ezincinci kwaye kungafuneki ukuba zisebenzise umpu. Kwaye iyoma ngokukhawuleza kwaye ithintele zonke iintlobo zokuvuza.
Kwaye siyaphela Olunye uphawu oluphakanyiswe kakhulu, olungenzi nje kuphela iisiliconi ezijolise kwi-aquariums, kodwa ikwasetyenziswa kakhulu kwicandelo lobungcali. I-silicone yoboya imile okomisa ngokukhawuleza okukhulu, ingabi mbi ngokuhamba kwexesha, ukuxhathisa amaqondo obushushu aphezulu kunye asezantsi kwaye unamathele kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke ngexesha lokomisa kwaye ugcine i-silicone kubushushu oboniswe kwibhotile.
Yakha kwakhona, iMizi mveliso ...
Olu phawu lwentengiso Ingcali yemveliso ye-DIY Ine-silicone elungileyo kakhulu, elungileyo ye-aquariums. Ziyabonakala ngokukhawuleza ixesha lokumisa ngokukhawuleza, kunye nokuhambelana kungekuphela neglasi, kodwa kunye ne-aluminium kunye ne-PVC. Iyabonakala, ayinayo i-fungicides kwaye kulula ukuyifaka, iyenza ukhetho olunconywayo.
Isilicone ekhethekileyo yolwandle yale brand nayo inokusetyenziswa ngaphandle, njengoko inqabile emanzini nakwimozulu. Inevumba elamkelekileyo, iyoluka kakhulu kwaye ngokubanzi inamathela kakuhle kwiglasi, iyenza ilungele ukulungiswa okanye ukwakha ii-aquariums.
Apho ungathenga khona abicah ashibhile
Kukho indawo ezininzi ezahlukeneyo apho sinokuthenga khona i-aquarium silicone, kuba ukuthengiswa kwayo akukhawulelwanga kwiivenkile zezilwanyana, kodwa kunokwenzeka ukuba uyifumane kwiindawo ezikhethekileyo kwi-DIY kunye nolwakhiwo.
Okokuqala, kwi Amazon Uya kufumana inani elinomtsalane leempawu zesilicone. Ukongeza, unokuqhagamshelana nezimvo zabanye abasebenzisi ukufumanisa kwaye ukhethe abicah olungele iimfuno zakho. Kwaye ukuba une-Prime function enesivumelwano, uya kuyifumana ekhaya ngaphandle kwexesha.
U-Leroy Merlin Ayinantlukwano yoyikekayo, enyanisweni kwiphepha layo elikwi-intanethi inee-silicones ezimbini ezizodwa zasemanzini ezivela kwimveliso yeOrbasil kunye neAxton. Into enomdla kukuba ungakhangela ukuba iyafumaneka na kwivenkile ebonakalayo, into eluncedo kakhulu ukuphuma ngokukhawuleza.
Kumaziko okuthenga afana Carrefour Banazo nezinye iimveliso zesilicone ezikhoyo, nangona kungachazwanga ukuba zezamanzi. Nangona kunjalo, unokujonga kwinkcazo kwaye ukhethe ukuba uyithenge ngokwasemzimbeni okanye kwi-Intanethi ngeNdawo yentengiso, ukhetho olunomdla kakhulu.
En IBricomart Banotywina olwahlukileyo lwamanzi olwandle, ubuncinci kwi-Intanethi, ukusuka kuhlobo lweBostik. Njengakwezinye ii-erbs ezifanayo, ungakhangela ukufumaneka kwivenkile ekufutshane nawe, uyikhethe okanye uyithenge kwi-intanethi.
Ekugqibeleni ungene Bauhaus Banayo enye, ebonakalayo, i-silicone ekhethekileyo ye-aquariums kunye ne-terrariums, onokuyifumana kwi-Intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo. Isebenza ngokufana nezinye iiwebhusayithi ze-DIY, kuba unoku-odola kwi-Intanethi okanye uyikhuphe kwivenkile.
I-Aquarium silicone ngumhlaba wonke, ngaphandle kwamathandabuzo, ekufuneka ulawulwe ukuze singabanjiswa xa i-aquarium yethu ivuza. Khawusixelele, ingaba yakha yakwehlela? Ngawaphi amava oye waba nawo nge-silicone? Ngaba uyayithanda imveliso ethile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Abicah abicah